Amalungu Ebhodi kanye Nethimba Eliphethe - Ipulatifomu Yesineke Yomhlaba Wonke Yezinto Zokungezwani Nomzimba
Ikhaya>Amalungu EBhodi neThimba Eliphethe
Amalungu EBhodi neThimba EliphetheIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-09-10T19:34:27+02:00
Siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi ye-Global Allergy and Airways Patient Platform. Egameni lamalungu e-GAAPP kanye nesigungu sayo Esiphezulu, ngiyakwamukela futhi ngikumema ukuba uhlole le webhusayithi, ujwayelane nenethiwekhi yethu, futhi wabelane ngemibono yakho nokukhathazeka kwakho nathi.
Ngo-2009, amaqembu eziguli ahlangana eBuenos Aires, e-Argentina, ukusungula i-GAAPP njengenhlangano exhumanisa izinhlangano enentshisekelo efanayo: ukuxhasa nokwenza ngcono izinga lempilo yabantu emhlabeni jikelele abanezifo ezibangela ukungezwani komzimba nesifuba somoya. Kusukela lapho sikhule saba yinhlangano yomhlaba wonke enamalungu angaphezu kuka-60 avela kuwo wonke amazwekazi abelana ngolwazi, imikhuba emihle, ukukhathazeka namathemba.
Ngenkathi izinze eVienna, e-Austria, iBhodi lethu limele zonke izifunda zomhlaba ezinokwehluka kwamaqembu amakhulu namancane, konke okunenhloso efanayo: ukunika amandla iziguli nokukhulisa izwi elihlangene leziguli ukuze abathatha izinqumo ezinhlakeni zikahulumeni nezizimele, kuhulumeni nasezimbonini, bazokhumbula izidingo, izifiso namalungelo eziguli.
Ngenkathi sigxile esigulini, sisebenza ngokubambisana nabasebenzi bezempilo, abacwaningi nososayensi, imboni, kanye nohulumeni ukuqhubekisela phambili ukunakekelwa kwabantu abanezifo ze-atopic nezomoya. Siyavuma ukwehluka okujulile kwezifunda futhi sisebenzela ukuxhasa izifiso zazo zonke iziguli kungakhathalekile ukuthi zihlala kuphi.
Inhloso yethu ukusiza iziguli nemindeni yabo kulo lonke uhambo lwabo lokunakekelwa kwezempilo. Ngokulingana, siphakamisa izindaba ezikhathazayo ezigulini ezinabenzi bezinqumo kuzwelonke nakwamanye amazwe. Siyisithangami sokuhlanganyela ngemibono yohlelo nenqubomgomo.
Ngikumema ukuthi uhlole la makhasi nezixhumanisi zethu kozakwethu abahlukahlukene bamazwe aphesheya. Siyayazisa imibono yakho nezincazelo zakho zokwesekwa, kufaka phakathi ukwesekwa kwezezimali, njengoba sisebenzela ukukhulisa ukuqwashisa komphakathi ngalezi zifo nokwenza ngcono izimpilo zalabo abathintwe yizo.
Ukubaluleka kokulalela izwi lesiguli kubalulekile futhi manje kuzozwakala kakhulu kunakuqala njengoba sisebenza ku-WHO GARD, GINA, GOLD futhi sishicilela izindatshana ezibuyekezwa kontanga ngombono wesiguli.
Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi nganoma yimiphi imibuzo noma iziphakamiso.
UTonya A. WindersuMongameli
UKristine WhorlowIPhini likaMongameli lokuqala
UVanessa ForanIphini Likanobhala
UDkt Ashok Gupta Iphini likaMgcinimafa
USusanne HintringerUmxhumanisi Wokufinyelela Kwezwe Nomhlaba
UVictor Gascón MorenoUkuguqulwa Kwedijithali Nomholi Wephrojekthi